प्रवास : सापकोटा झोक्किए पछि तातोपानी नाका खुलाउन पहल ! – ebaglung.com
२०७४ चैत्र २७, मंगलवार १९:०८	Top News, अन्य समाचार
दिपक न्यौपाने,युएई, १० अप्रिल २०१८। प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुर्ब सूचना तथा संचार मन्त्री एबम हालमा सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न. १ का साम्सद अग्नि सापकोटा झोक्किदै भनेका थिए ३ बर्ष सम्म तातोपानी नाका खोल्न नसक्नु लज्जाको बिसय भएको छ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि वर्षिक २० अर्ब रुपैयाँको कारोबारबाट पाँच अर्ब राजस्व संकलन हुने उत्तरतिरको एकमात्र ठूलो तातोपानी नाका बन्द छ। भूकम्पबाट खासै क्षति नपुगे पनि सँगै चट्टाने पहिरो खस्दा तातोपानी बजार क्षेत्रका घर संरचना किचिएका थिए। त्यति क्षति नबेहोरे पनि खासा बजार खाली गराउँदै चीनले ‘सिल’ गरेको प्रवेशद्वार अझै बन्द छ।
भूकम्पपछि २० महिनादेखि बन्द रहेको यो नाका नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक नाकामात्र नभई दुई देश बीचको मित्रताको इतिहास पनि हो । तातोपानी नाका ५० वर्षदेखि नेपाल र चीनलाई जोड्ने एकमात्र मुख्य विन्दु हो । अरनिको राजमार्ग चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भई २०२३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो राजमार्ग बनाउँदा भारत र रूसजस्ता विशाल दुइटा छिमेकी मुलुकसँग चीन पौँठेजोरी खेलिरहेको थियो । त्यतिबेला रूसले चीनमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो भने भारतसँग युद्ध भइरहेको थियो ।
त्यस्तो अवस्थामा अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा प्रवेश गराउने झ्यालको काम गरेको थियो । अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाकै कारण चीनले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको ल्हासादेखि खासासम्मको ८०६ किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम ‘चीन–नेपाल मैत्री राजमार्ग’ राखेको छ । तातोपानी खासा चीनकै शब्दमा चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने एउटा मुख्य द्वार पनि हो । पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने द्वारको रूपमा घोषणा नै गरेको छ । तसर्थ यो नाका चीनको तिब्बती जनताको समृद्धि र तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको छ ।मुल बजारकै कैयौँ घरहरुमा ताल्चा झुन्डिएको देखिन्छ।
सन् १९५९ भन्दा अघि तिब्बतको वैदेशिक व्यापार यातोङ नाकाबाट हुने गथ्र्याे । यातोङ नाका भारतको सिक्किम र भुटानसँग जोडिन्छ । १९५९ पछि यो नाका पूर्णरूपमा बन्द भयो । १९६७ मा अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि तातोपानी नाकाले यातोङको स्थान लियो । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प जानु अघिसम्म तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यापार भइरहेको थियो
विक्रम सम्वत् २०२० को दशकमा अरनिको राजमार्ग सञ्चालन आए यता रुपरङ्ग फेरेको तातोपानी बजारका धेरैजनाले राजधानीमासमेत सम्पत्ती जोडेको चर्चा गरिन्छ।
चीनबाट हुने व्यापार एवं पर्यटन यहाँका मानिसहरुको आम्दानीको मुख्य श्रोत रहँदै आएको छ। त्यसैगरी खासा नाका बाट जम्मा हुने अर्बौंको राजस्वले राज्यको आयस्रोतमा वृद्धि गरेको छ। भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको भने भविष्य अन्यौलमा परेको छ।
झन्डै ८५ प्रतिशत निर्माण सकिएको उक्त सुख्खा बन्दरगाह अवस्थित जमीनको भौगर्भिक अध्ययनपछि मात्र पुनर्निर्माण सुरु गर्न सकिने चिनियाँ पक्षले बताएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
यता तातोपानी नाका तत्काल खुलाउनका लागि सरकारि स्थरबाट नै कुटनैतिक पहल भैरहेको कुरा पुर्ब सूचना तथा संचार मन्त्री एबम हाल सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न.१ का साम्सद अग्नि सापकोटाले जानकारी गराए।
यस्तो छ, ढोरपाटन महोत्सवको समय तालिका, बैशाख १ गते उदघाटन, २ गतेबाट प्रतियोगिता सुरु !